Tightwad Terror talata - Sarimihetsika maimaim-poana ho an'ny 10-12-21 - iHorror
Home Sarimihetsika mahatsiravina Tightwad Terror talata - Sarimihetsika maimaim-poana amin'ny 10-12-21
Tightwad Terror talata - Sarimihetsika maimaim-poana amin'ny 10-12-21
by James Jay Edwards Oktobra 12, 2021
by James Jay Edwards Oktobra 12, 2021 295 hevitra
Hey Tightwads! Fotoana hanaovana talata fampihorohoroana Tightwad hafa, izay midika sarimihetsika maimaim-poana bebe kokoa hampiomanana anao amin'ny Halloween! Eto izy ireo!
The Fog (1980), avy amin'ny sary AVCO Embassy Pictures.
Ilay zavona dia momba ny tanàna amoron-tsiraka mankalaza ny faha-XNUMX taonany. Eo am-piomanana amin'ny fety dia miseho ny zavona tsy hita taratra… ary miaraka amin'izany no miafina ny zava-nitranga taloha tao an-tanàna.
Ity spookfest 1980 ity dia ny fanarahan-dia nataon'i John Carpenter tamin'ny zava-bitany Halloween (nanao sarimihetsika fahitalavitra 2 izy nandritra ny fotoana fohy). Amin'ny endriny mahazatra an'ny mpandrafitra dia nanoratra izy (niaraka tamin'i Debra Hill), nitarika sy namono ny sarimihetsika ary ny mpilalao dia ahitana anarana toa an'i Jamie Lee Curtis, Janet Leigh, Adrienne Barbeau, Tom Atkins, Hal Holbrook, ary John Houseman. Natao nahatsiravina io tamin'ny 2005, fa ity no voalohany. Mila mahita azy ianao ary mahita azy afaka mahita Eto ao amin'ny TubiTV.
Toad Road (2012), nahazoana lalana avy amin'i GatebreakR.
Road toad dia momba ny sakaizan'ny mpivady iray izay lasa variana amin'ny toerana fantatra amin'ny hoe Toad Road izay honohono hanafina ny vavahady mankany amin'ny helo. Mandritra ny zava-mahadomelina dia mandeha mankamin'ny Toad Road izy roalahy. Nanjavona ilay zazavavy, ary nifoha ilay zazalahy enim-bolana taty aoriana nefa tsy nitadidy ny toerana nisy azy na ny zavatra nataony.
Nolazaina tamin'ny fomba fanaovana sary hosodoko, pseudo-fanadihadiana, Road toad dia sarimihetsika kely mahatsikaiky 2012, nanjary nampihoron-koditra noho ny zava-misy fa ny mpilalao sarimihetsika, Sara Anne Jones, dia nodimandry noho ny fatran'ny zava-mahadomelina rehefa nanatontosa ny festival. Topazo maso Road toad Eto ao amin'ny KinoCult.
Curve (2015), nahazoana lalana avy tamin'ny Universal Pictures.
Curve dia miresaka momba ny vady ampakarina izay, eny an-dalana hihaona amin'ny fofombadiny sy hanambady, manana olana amin'ny fiara. Samaritanina tsara no manampy azy, ary ho valisoa dia manome azy mitaingina izy. Rehefa manandrana maka an-keriny azy izy, minia mikapoka ny kamio io ary tafahitsoka… na dia afaka mandositra aza izy.
Ho an'ny mpampientanentana misy, ity sarimihetsika 2015 ity dia mandaitra tsara. Julianne Hough dia kintana amin'ny tovovavy mahantra, ary Teddy Sears no mpamonjy azy. Zahao hoe Curve Eto ao amin'ny TubiTV.
Skeletons in the Closet (2018), natolotry ny Cow Lamp Films.
Taolana ao amin'ny efi-tranonao
Taolana ao amin'ny efi-tranonao dia fanangonana cool amin'ny taona 2018 Tales avy amin'ny Crypt-koditra fohy namboarina ho fampisehoana horohoro amin'ny fahitalavitra alina fa misy ankizy mijery miaraka amin'ny mpiambina azy. Mazava ho azy, ny tena fiainana dia lasa mamitaka toy ny fampihorohoroana an-tserasera ihany.
Tamin'ny voalohany fantatra amin'ny anarana hoe Chop Shop, Taolana ao amin'ny efi-tranonao dia Retro-kitsch mahafinaritra mahafinaritra miaraka amin'ny hatsaran-tarehy mahafinaritra 80, tsy mitovy amin'ny hafa WNUF Fahitalavitra manokana, fa tsy tena mitovy aminy koa. Raha tianao ny sary mihetsika anthology 80s, dia mihady ianao Taolana ao amin'ny efi-tranonao. Mihady ho anao Eto ao amin'ny Vudu.
The Plague Dogs (1982), nahazoana lalana avy tamin'ny Embassy Pictures.
Ny alika pesta
Toy ny hoe tsy nanimba ny fahazazanao ny talen'ny Martin Rosen Rano ambany, niverina tamin'ny 1982 izy niaraka tamin'ny Ny alika pesta. Ity endri-panentanana ity dia momba ny alika naif roa izay afa-mandositra ny horohoro any amin'ny laboratoara fitiliana biolojika, saingy miatrika horohoro misimisy kokoa any amin'ny tontolo ivelany rehefa mihazakazaka mafy mitady fahalalahana izy ireo.
Ny alika pesta dia sary miaina, fa sady mbola mahavaky fo no mahatsiravina. Na dia mitodika any amin'ny olombelona aza ny ankamaroan'ny herisetra, ny alika no toetra miantra. Ity iray ity dia ho sarotra ny mijery ireo tia alika any. Nampitandremana ianao. Jereo Ny alika pesta Eto ao amin'ny TubiTV.